I-BWC040 - Ikhamera ye-HD Worn okungabizi | Izixazululo ze-OMG
I-BWC040 - Ikhamera ye-HD Worn engabizi
Umphakathi awusazimisele ngokuthatha izwi lamaphoyisa ngenxa yokuthi ukuphoqeleka kwakudingeka ezenzakalweni ezinodlame, futhi lokhu kungathembani kwenza ukuthi kube nzima ukuthi amaphoyisa enze imisebenzi yawo. Ukuphendula lokhu, izakhamizi kanye nezishayamthetho sezicele zonke izikhulu ukuthi zisebenzise amakhamera agqokwa ngomzimba (ama-BWC) ukuze konke ukusebenzisana nezakhamuzi kuqoshwe. Abantu abaningi banethemba lokuthi lobu buchwepheshe buzohlinzeka ngokuguqula amasiko, kwandise ukuziphendulela kwephoyisa futhi kunciphise ukuxhaphazwa kwamandla.
Amakhamera agqokwa ngomzimba azoba nomphumela ophumelelayo kubo bonke abathintekayo: izikhulu kanye nezakhamizi ngokufanayo kufanele ziziphathe kangcono uma bazi ukuthi ukuziphatha kwabo kuyaqoshwa, kunciphise isibalo sokusebenzisana okunodlame phakathi kwezikhulu nezikhulu. Ezimweni lapho izikhulu zisebenzisa amandla, i-video video izonikeza ubufakazi obuyiqiniso ngalokho okwenzekile, ukuze izikhulu ezihlukumezayo zigwetshwe ngokushesha, zixoshwe, noma zitholwe zinecala lobugebengu, ukuze zivimbele ekusebenziseni kabi amandla.
Izici Main: Ukungenwa ngamanzi, ukushaqeka, inkomba ye-Laser, ubusuku obumhlophe be-LED, Ifayela lokuphatha elibethelwe, ukutholwa kokunyakaza, i-AIT chipset 150Degree Wide angle 128GB Max isitoreji
Ukuxazulula kwevidiyo: I-2304 * 1296 30fps / 1920 * 1080 30fps / 1920 × 1080 30fps / 1280 × 720 60fps / 1280 × 720 30fps / 848 × 480 60fps ku-MOV
Isixazululo sezithombe: 34M/23M/18M/13M/9M/6M/4M at JPG
Umbono ebusuku: Manual / Auto IR switch. Ukuqashelwa kobuso kuma-10meters
Ukunyakaza okunamandla: I-2meters i-drop drop.
I-lens angle: I-150 ° ububanzi obubanzi
Khombisa: 2.0inch 4: Ukubonisa umbala we-3FHD
Impilo yebhethri: i-11hby emile
Isitoreji seKhadi le-SD: I-1920 * 1080P 30fps 60mins / 7GB, max 128G
Isistimu esebenzayo: IWindows XP / VISTA / 7 / 8
Usayizi womzimba: 83mm * 57mm * 29mm
I-BWC040 - Ividiyo Yomzimba Ogqokile Ividiyo
I-BWC040 - Ikhamera ye-HD Worn engabizi igcine ukuguqulwa: I-December 4th, i-2019 by admin
Ukubuka okuphelele kwe-5287 Ukubuka kwe-3 Namuhla